Sendikan’ny mpiasan’ny ladoany: tsy hanao ”service minimum” intsony ireo mpitokona | NewsMada
Sendikan’ny mpiasan’ny ladoany: tsy hanao ”service minimum” intsony ireo mpitokona
Mihamafy ny fitokonana ataon’ny sendikàn’ny mpiasan’ny ladoany (Sempidou). Nandritra ny fivoriambe nataon’izy ireo, omaly, tetsy Antanimena. Natao ny fifidianana raha hotohizana ny tolona na hatsahatra. Nanatrika izany ny mpiasa rehetra mpikambana ary nisy koa ny solontena avy any amin’ny sampandraharaha any amin’ny faritra, toy ny any Toamasina, Taolagnaro, Antsirabe, Toliara, Fianarantsoa, Antsiranana, Nosy Be, Mahajanga, sns. Neken’ny mpiasa miisa 363 fa hotohizana ny fitokonana, raha nitsipaka ny iray ary nanao vato fotsy koa ny iray.
Taorian’izany, nilaza ny filohan’ny Sempidou, Andrianavalona Herizo, fa hitohy ny hetsika ary hihamafy. Anisan’izany ny tsy hanaovana asa farany kely (service minimum) intsony eny amin’ny sampandraharahan’ny ladoany manerana ny Nosy. Nandritra ny roa volana sy tapany nitokonan’ny mpiasa izay mantsy, nisy ihany ny asa farany kely natao ary nofidiana ihany koa ny fotoana nitokonana. Tany amin’ny sampan-draharaha Toamasina Petrol, ohatra, isaky ny tamin’ny 2 ora tolakandro, hatramin’ny 5 ora hariva ny ora niasana, ary novaina tamin’ny 8 ora ka hatramin’ny 12 ora taty aoriana. Tsy misy kosa ny fiasana farany kely ny alakamisy sy ny zoma. Nahampahafantarin’izy ireo ny orinasa na ny sampandraharaham-panjakana voakasika (OMH, LP, Bolloré, sns) ireo fotoana ireo.
Ho an’ny sehatra hafa, nihena ny asa vita nikarakaran’ny mpiasan’ny ladoany, mpikambana anaty Sempidou, ny entana na vokatra an’ny orinasa vaventy, toy ny an’ny QMM any Taolagnaro), ny Tetikasa Ambatovy any Toamasina, ny Cottonline any Antsirabe ary ireo orinasa afakaba. Nohitsin’ny filohan’ny Sempidou fa “aleo ho tsapan’ny fitondrana ny fitakiantsika rehefa miantraika any amin’ireo sehatra iasantsika ny fitokonana satria tsy mihaino antsika mihitsy ny mpitondra”.
Nomarihin’ny Sempidou kosa fa mitohy ny fikarakarana ny lafiny mahakasika ny fitsaboana (fanafody, solika, ….), ny famonoana afo (pompier), ny lafiny maha olona samihafa.
Mikasika ny tohin’ny hetsika, hiaraka amin’ny Firaisankinan’ny sendika eto Madagasikara (SSM) etsy Ambohijatovo ny Sempidou, anio. Hitety ny biraon’ny ladoany ,izy ireo, ka eny Antaninarenina (foibe jeneraly) rahampitso zoma, eny Antanimena ny alatsinainy ho avy izao, eny Ivato ny Talata, mitohy any amin’ny birao hafa ary miverina amin’ireo voalaza ireo avy eo. “Tanjona ny ahalalan’ireo sampandraharaha sy ny tompon’andraikitra ny tanjaky ny hetsika sady mba ho hitantsika koa ireo mpiasa tsy manaraka ny tolona na koa ho hitan’izy ireo fa miady ho an’ny mpiasan’ny ladoany manontolo isika Sempidou”, hoy ihany ny filohany.
Nilaza koa ny filoha Andrianavalona Herizo, fa “mpikambana ao anatin’ny Sempidou ny 85%-n’ny mpiasan’ny ladoany manerana ny Nosy. Matoa misy ny asa sasany mandeha, misy ny tsindry atao amin’ireo mpiasa vitsivitsy, vao tafiditra miasa ao amin’ny ladoany ka mbola voafatotry ny fe-potoana amin’ny fifanarahan- kasa. Tratry ny tery na ny tsindry izy ireo